वाम भर्सेज लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणमा मधेशी दल कता ?
२o७५ भदौ ४ सोमबार / Monday, August 20, 2018
काठमाडौँ । अहिले देश तालमेल र गठबन्धनको राजनीतिक चक्करमा रिंगाईहेका छ । एमाले र माओवादीको पार्टी एकतासम्मै गर्ने चुनावी तालमेल र सहकार्यको साईड ईफेक्टले देशमा राजनीतिक धु्रविकरणलाई शिखरमा उचाल्दै छ । लोकतान्त्रिक भर्सेज वामपन्थी खेमाको गठबन्धनले मधेशी दलहरुलाई यक्ष प्रश्नको घेरामा पारिदिएकोछ की अब मधेशी दल कुन कित्तामा जाने ? वाम गठबन्धनमा की लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ? या मधेशी दल स्वतन्त्र हैसियतमा रहने ?
किनभने मधेश मैत्री दल काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सिद्धान्ततः बिघटन भैसकेको छ । सत्तालिप्साका कारण मात्रै माओवादी सरकारमा छ । माओवादीलाई सरकारबाट घोक्रेठयाक लगाएमा मंसिरको चुनाव प्रभावित होला की भन्ने डरले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी मन्त्रीहरुलाई पलमुक्त गर्न हिच्किचाईरहेका छन ।
होईन भने माओवादी र काँग्रेसको टुटेको राजनीतिक साईनोको जुईनो फुस्किदा त्यसको सिधा असर मधेशवादी दललाई नै परेको छ । किन भने माओवादीले संविधान संसोधनको विपक्षी दल एमालेसँग गरेको गठबन्धनले अब मधेशी दल माओवादीसँग आश्वस्त र विश्वस्त भैरहने अवस्था बाँकी रहेन । उता काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा मधेशी दल सामेल हुने हो भने त्यसले मात्रै मधेशी दलको माग पुरा गर्ने संभावना लगभग कमजोर छ ।
माओवादीलाई सरकारबाट घोक्रेठयाक लगाएमा मंसिरको चुनाव प्रभावित होला की भन्ने डरले मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी मन्त्रीहरुलाई पलमुक्त गर्न हिच्किचाईरहेका छन ।
मधेशी दलहरु लोकतान्त्रिक वा वाम गठबन्धनको राप र चापबाट मुक्त भएर तेस्रो शक्तिका रुपमा नै बसिरहन पनि उनीहरुका लागि सुरक्षित राजनीतिक राजमार्ग होईन । किन भने ठूला दलहरुको वाम तथा गैर वाम गठबन्धन भनेको देशलाई दुईदलीय राजमार्गमा लैजाने कसरत हो, जहाँ मधेशी तथा अनय क्षेत्रीय दल स्वतः छायामा पर्ने निश्चित छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत मधेशी दलले देखाएका छन । राजपा, संघीय समाजवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्व काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुदै पनि छन् । वार्ताहरु जारी छन र गठबन्धन बनाउने समितिहरुमा पनि उनीहरुको सहभागिता भैरहेको छ । तर यसले उनीहरुको मुख्य माग संविधान संसोधनको माग पुरा गराउन संभव हुने छैन किन भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनसंग आवश्यक दुईतिहाई मत ल्याएर संसदमा हालीमुहाली गर्ने हैसियत बनिसकेको छैन । बरु यो संभावना थोरै भए पनि वाम गठबन्धनसँग छ, भलै त्यो पनि धेरै कठिन छ ।
स्थानीय तह चुनावको ताजा मतादेशको जगमा मधेशी दलहरुले तत्कालै पार्टी एकता गर्नु उनीहरुका हितमा छ । २ नम्वर प्रदेशको असोज २ को चुनावमा तीन मधेशी दल राजपा, संघीय समाजवादी र लोकतान्त्रिक फोरम मिलेको भए पहिलो दल बन्ने जनादेशले देखाएको छ । तर जनादेश अनुसार मिल्ने र ठूला दल विरुद्ध झम्टिने रहर र हैसियत तीनटै मधेशी दलले देखाईरहेका छैनन् । किनभने उनीहरुको नेतृत्वमा नेताहरुको आपसी ईगोले एकको अस्तित्व अर्कोले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छैन ।
राजपाका नेता हृदेश त्रिपाठी एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेर राजपालाई दनक दिए । फोरम लोकतान्त्रिकमा नेता तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव वाम गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन भने अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई काँग्रेसमा जान वा गठबन्धनमा जानैपर्ने ठूलो परिस्थितिजन्य वाध्यता थपिदैछ । यो दल चुनाव अगावै काँग्रेस र वाम मध्येका दुबै गठबन्धनमा बिभक्त भएर विलय भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा नेता तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देव वाम गठबन्धनमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन भने अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई काँग्रेसमा जान वा गठबन्धनमा जानैपर्ने ठूलो परिस्थितिजन्य वाध्यता थपिदैछ ।
संघीय समाजवादीमा पनि दुई धार छन । जनजाती तर्फका नेता अशोक राई वा राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पूर्व एमाले हुन्, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पूर्वमाओवादी हुन् । स्वभाव, विगतको पृष्ठभुमि र मुद्धालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा संघीय फोरम वाम गठबन्धनसँग निकट छ । उसले मधेशको उदाउदो शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । तर काँग्रेस भर्सेज वाम गठबन्धनको रापमा अब संघीय समाजवादी एकलै मधेशको बलियो शक्तिका रुपमा टिकीरहन धेरै चुनौति थपिएका छन ।
मुलतः पहिलो संविधान सभापछि दलहरुमा मधेश राजनीतिको नेतृत्व लिने होड चल्यो । महन्थ ठाकुरले काँग्रेसको सजिलो र सम्मानित तथा सुरक्षित राजनीति त्यागेर तमलोपा बनाए । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल हुन की रेणु यादव जस्ता आफैमा स्थानीय प्रभाव बलियो भएका तत्कालिन राप्रपा नेताहरु पनि महन्थको मधेश व्राण्डको राजनीतिका सारथी बने । हृदयेश त्रिपाठी तराई मधेशका पुराना र अग्ला नेता थिए, तर उनले पनि महन्थलाई नेता मानेर मधेशवादी राजनीतिमा नयाँ रंग भर्न केही वर्ष मेहनेत गरे । कांग्रेसका एक शक्ति केन्द्र विजय गच्छदारले उपेन्द्रको फोरम हुदै मधेशवादी राजनीतिमा हाम फाल्दै पछि आफै नाईके भएको आन्दोलन नगर्ने तर सत्ता नछोडने मधेशी दल बनाए । विधान, दस्तावेज र पार्टी नीतिहरुमा जे सुकै लेखिएको भए पनि अहिले केही समय अघिसम्मका क्रान्तिकारी मधेशी दलहरुलाई अब पुनःराष्ट्रिय पार्टी बन्ने भोक जागेको देखिन्छ ।
महन्थ ठाकुरले काँग्रेसको सजिलो र सम्मानित तथा सुरक्षित राजनीति त्यागेर तमलोपा बनाए । सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल हुन की रेणु यादव जस्ता आफैमा स्थानीय प्रभाव बलियो भएका तत्कालिन राप्रपा नेताहरु पनि महन्थको मधेश व्राण्डको राजनीतिका सारथी बने ।
संविधान बन्नु अघिदेखि संविधान जारी भई लागू हुदै गैरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उग्र मधेशवादीहरु क्रमशः संविधान संसोधनको पराजय स्वीकार गर्न पनि राजी भए । अहिले भदौं ५ मा उनीहरुले संविधान संसोधनका पक्षमा गरेको मतदान र स्वीकार गरेको परिणामका आलोकमा उनीहरु अब संविधानका असंतुष्ट हिस्सा बनिसकेका छन । जसरी तत्कालिन एमालेले २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो, अहिले मधेशवादी दलरुहरुको संविधान प्रतिको हेराई र पोजिसन पनि २०४७ को संविधानप्रतिको एमाले हेराई जस्तै तहमा बदलिएको छ ।
तर पछिल्लो वाम भर्सेज लोकतान्त्रिक ध्रुविकरणमा मधेशी दलको लागि अनपेक्षित, अप्रत्याशित र अति वाध्यात्मक हो की अब उनीहरु पनि तीन दल भएर होईन सिंगो एक दल भएमा मात्रै राजनीतिक मैदानमा शक्तिशाली हुनेछन् । अन्यथा उनीहरुको राजनीतिक भविष्य संकटतिर धकेलिने छ ।
अहिले काँग्रेस वा वाम दुबैतिरको होईन, पहिले मधेशी दलहरु वीचको सके पार्टी एकता, नभएमा चुनावी गठबन्धन निर्माण नै मधेशी दलको पहिलो अनिवार्य दायित्व हो । जनादेश र राजनीतिक निकास पनि त्यही हो । तर नेतै नेता र ईगो नै इगोले भरिएका मधेशी नेताहरु यो युगिन कार्यभार र चुनौति सामना गर्न मिलेर पहिले बलियो हुने अनि मात्रै वाम वा गैर वाम कित्तामा सामेल हुने सत्मार्गमा अघि बढ्न सक्लान त ?
ओलीको उर्लिँदो सर्वसत्तावादमा काँग्रेसको लत्रिँदो प्रतिवाद
काठमाडौं । केही दिनयता दुई तिहाइ समर्थनको आडमा सरकारले लिनथालेको निर्णयहरु अस्वाभाविक र निकै ‘बोल्ड’ देखिनथालेका छन् । ०७४ भदौ १४ यताका तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, आइतबारको
विरोधबाट किन डरायो दुई तिहाईको सरकार ?
काठमाडौँ । निर्वाचनपछि संस्थागत हुदै गएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापले सन्देह पैदा गरेको छ । सरकार आफुसँग दुई तिहाई बहुमत छ भन्दै मा सबै थोक गर्न छुट छ भने
तानाशाहको अभ्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओली !
काठमाडौं । धेरै दिन बितेको छैन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर भेट्न पुगेका आफ्नै नेतृहरुमाथि एनजीओहरुको वहकाउमा लागेको भन्दै हकारेर
जाजरकोटमा वर्षाका कारण यातायात ठप्प
सुनसरीमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणले गति लिँदै
इङल्याण्डसँगको तेस्रो टेस्ट भारतको नियन्त्रणमा
अमेरीकन रेडक्रसद्वारा अभ्यास सामग्री हस्तान्तरण